Umama Omnandi Umthandazo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Siyakumema ukuba ufunde eli nqaku ligcwele ithemba, apho unokufumana khona imithandazo efana nayo Umama omnandi umthandazo. Ukudumisa uMariya oyiNtombi Enyulu; Sincoma ukuba uchithe imizuzu yexesha lakho uthetha noMaría Madre de Dios.
1 Umthandazo omnandi Umama kunye nokumkanikazi wendalo iphela:
2 Umthandazo omnandi uMama kaThixo uSomandla:
Umama Umnandi Umthandazo ukumkanikazi kwindalo yonke:
«Mama othandekayo, osikelelweyo nonyulu, Amehlo akho abonisa konke ukusulungeka nobungcwele obukho kwindalo iphela; emehlweni akho ndifumana elinye ilizwe apho kulawula kuphela ubuqili bobufazi kunye nobumnandi obunikwa nguMama. Wena osezulwini ngoku, unika amafu umbala obomvu krwe, yonke into imnandi, yonke into ikhanya ecaleni kwakho.
Mna, mama othandekayo, andikuboni ukude, uhlala kum kwaye uhleli ezinzulwini zomphefumlo wam; kwimbonakalo nganye yesidima ndiziva indlela izandla zakho ezithambileyo ezibonisa ngayo ubuso bam ngothando lukaMama olusikelelekileyo.
Owu Mama olungileyo, ungaze undilahle, ungashiyi icala lam. Ndinqwenela ukuba ukujonga kwakho kundikhaphe rhoqo, oko kujonga kukaMama omnandi. Ungaze usishiye njengabantwana bakho; sithathe ngesandla sakho kwindlela elungileyo usivumele sidibane nonyana wakho uYesu Krestu ekupheleni kohambo lwethu, ngaphaya kobomi, ngaphaya ukufa.
Ubungakanani ubumnandi obukho kuwe, ubugqithisela kum, undondla ngabo. Ecaleni kwakho, oh Mama olungileyo, ndiziva ndikhuselekile emgodini, ndingunyana wakho kwaye ndihlala phantsi kwentsikelelo yakho naleyo kaBawo onamandla onke; othe wakukhethela ubunyulu bakho nobabalo lokuba nguMama kaYesu, isiqhamo esisikelelweyo sesibeleko sakho. "
Umama Umnandi Umthandazo kaThixo usomandla:
UMariya olungileyo, iNtombikazi eNgcwele yobunyulu obungenakuphikiswa; Ndishiya ubomi bam, umphefumlo nentliziyo yam ezandleni zakho njengomnikelo othobekileyo, ukuze uhlale undigubungela ngengubo yakho kwaye ujonge kum ngovelwano, ungandishiyi uMama wam, ndinike intsikelelo yakho endihlala ndikulungele ukuyifumana yiyo.
Mama olungileyo, wena kumkanikazi wam, ukhululekile esonweni kwaye ukhulelwe uyintombi; are inkwenkwezi inkulu kwindalo iphela, ekhethwe nguThixo ukuba ikhanyise imihla yam kunye nendlela yobomi bam, ugqibelele kwaye usasaza ubumnandi, ukuzola nolonwabo. Ngamanye amaxesha ndiye ndizibone ndimfanyekiswe bubumnyama, ndilambele ilizwi likaThixo kwaye ndingena khondo liqinisekileyo; kodwa ndiyathemba ukuba uyakubakhona, Mama olungileyo ukuba ube yikhampasi yam endleleni.
Ungandivumeli ukuba ndishiye ukulunga konyana wakho uYesu, mandingaphambuki kwindlela ekhokelela kuBawo oyiNgcwele; itsala umdla wam njengomama enokwenza nosana lwakhe, ngeenjongo ezizodwa zokumkhusela nokumkhokela kwindlela elungileyo. Ndiyakucela emadolweni am, Mama wam othandekayo, ukuba undigcine kude kumampunge nakwiminqweno emibi.
Olu hambo lobomi bam khange lube lula, uyazi; Kodwa ndinombulelo kuThixo uBawo ngesipho sobomi, ndifuna ukusebenzisa esi sipho sindivumele ukuba sonwabe, sindizalise ngethemba, kodwa mna ndedwa andisoloko ndisifumana; yiba nguMariya oyiNtombikazi omnandi, ondityhala rhoqo kusasa ukuze andigcwalise ndinqwenela ikamva.
Ndifuna ukuziva ngathi ndingumntwana kwakhona, ndizele isidima kunye neengcinga ezimsulwa, ndimnandi, ndimncinci, ngaphandle kokukhetha okanye ukugweba; ndenze unyana olungileyo kaThixo, unyana onezi mpawu zomntwana wokumkhonza ngokuthembeka nangokunyanisekileyo, nceda, Mama Omnandi.
Ndizinikele kuwe Mama omnandi, yiba nguwe obhala ubomi bam, kuba njengoMama olungileyo ndiyazi ukuba undifunela ikamva elilungileyo; Andikhuselekanga ekuweni, ngamanye amaxesha ndinzulu kwaye ndinamandla kunamanye amaxesha, ukuwa ngakunye kufanele kube sisifundo ekufuneka sisifundwe. Ndiyakucela ukuba undinike isibindi kunye namandla okuvuka kuko konke ukukhubeka, kuba ndikulungele ukuwa amaxesha ngamaxesha njengoko kufuneka ndikubonise isidima nokuthobeka onokuthi ukutyala kum.
Kuba ndifuna kuphela loo nto, Mama olungileyo, ukuba uhlale phantsi kwengubo yakho yokulunga, ndicela uBawo oyiNgcwele ukuba andivumele ndihlale kwintsapho egcwele ukukhanya kwakho nobabalo lwakho olungcwele. Ndinqwenela ukuba nethuba lokukhulisa abantwana bam phantsi kwelizwi likaThixo, ukuze, njengonyana wakho uYesu, babe zizicaka ezibekekileyo zikaBawo owadala indalo iphela.
Owu Mama olungileyo, akukho mntwana wakho ungene ezingalweni zakho, kungenxa yakho kuphela mfazi onenceba noncedo lwamaKrestu, ndiza kukukhusela ndicela uncedo, ungaze undilahle Mama oyingcwele, ngaphandle kwakho andinakufumana indlela eyiyo yokukhonza uThixo. Mama osikelelweyo kunye neNtombikazi enguMariya, ndinike intwana yokulunga kwakho ukubona abantwana bam benothando osibonayo.
Ndivumele isipho sokubona wonke umntwana emhlabeni ngamehlo onobubele; Umama wethu ukhusela abo bantwana bakho bangenalo uphahla lokulala ngokuhlwanje, yiba yindawo yabo yokuhlala; Ndiyakucela Mama oyingcwele kaThixo ukuba ube sisonka esitshisayo phezu kwetafile yomKristu ngamnye, kuba ngokuhlwanje uninzi lwabantwana bakho alunakuba nokutya kokomoya okanye isonka kwitafile yabo.
Qhubeka usilwa noMama ongcwele ukoyisa ubumnyama, sinike ukukhanya kwakho kunye nobushushu njengoMama onothando. Bamkele abafuduki esinqeni sakho, babe likhaya labo kunye nohlanga, khusela abagulayo, ubaphilise kwaye ubanike ithuba lokuphilisa ngethemba lokulinda ukufa ngexesha elifanelekileyo ngaphandle koloyiko, kuba uqinisekisa ukuba ukufa ngumhlobo wanaphakade ubomi.
Ndiyaxolisa ngezono zam, ndimsusile uThixo entliziyweni yam kwaye lonto indenza ndizive ndibuhlungu. Ndinike isigwebo esihle sokungavumeli into engento nobubi ukuba bangene kwakhona, ungavumeli ukuba ndinyathele abazalwana bam ngenxa yam inzuzo yokuzingca. Ndivumele ndihambe, Mama oyiNgcwele, ndibambe ibunzi liphezulu kuba ndiyakwazi ukuba ndenze phantsi kwamehlo akho othando nemfesane.
Yiva izibongozo zam, likhusele ikhaya lam phantsi kwengubo yakho kwaye usivumele ukuba bosulelwe kukulunga kwakho nobulungisa bakho. Siphe uxolo ekhaya kwaye usinike isipho sokuthanda ummelwane wethu; enkosi ngokuzisa unyana wakho uYesu kulo mhlaba ukuze asihlambe ezonweni; ungaze uvumele ukuba kube lilize, qhubeka usifaka kuthi ukulunga ukusasaza kwihlabathi phantsi kwamandla amakhulu kaThixo.
Unokuba nomdla: Umthandazo kuSanta Cyprian.